Ninkeyga wuxuu igu qasbaa xiliga galmada wax yaabo kale oo xaaraan ah ee maxaan sameeyaa? - iftineducation.com
Ninkeyga wuxuu igu qasbaa xiliga galmada wax yaabo kale oo xaaraan ah ee maxaan sameeyaa?
aadan21 / March 29, 2017
iftineducation.com – Qoys walba waxa uu ku dhismaa, taaba galaa, tanaadaa ama ku burburaa baaxada ay le’egtahay farxada guriga qoyskaas ku duugan.
Haddaba akhriso 10 qodob oo ka qayb qaata farxada qoyska: Si aad ugu soo baxdid mid qoyskiisa ama ka mustaqbalkiisu ay faraxsanyihiin fadlan raac talaabooyinkaan. Daacadnimo:ma jirto wax ka qaalisan oo lagu farxo lamaane daacad kuu ah markaasna ka shaqaynay sidii aad u higsan lagayd horumarka aad ka damacsantahay nolosha.
Howlkarnimo iyo firfircooni:labada qof ee is qaba marka ay doonayaan in gurigoodu uu noqdo beer dhalaalaysa oo loosoo xiiso waa in laga helaa labada lamaane mid walba howlkarnimo dheeraad ah oo uu muujiyo xiliga guriga iyo bulshada dhexdeeda intaba. qalbi furnaan:guriga lamaanaha ku nooli haday kala aaminsanyihiin waxyaalo keeni kara aamusnaan, baqdin iyo canaan waxaa dawo u noqon kara in labada ruux ay isu muujiyaan qalbi furnaan iyo kalgacayl.
Qiimayn:guri aan qiimayn iyo ixtiraam oolin ha noqoto labada lamaane ee is qaba ama xigaalka, deriska iyo xididkee waxa uu noqonayaa meel aan la jecclaysan waxaana ka soo baxaya farxad la’aan keeni akarta dhibaato weyn. Nadaafad:bilnaanta jir ahaaneed, guri ahaaneed iyo muuqaal wanaagsan waxay kordhiyaan oo kor u qaadaan xubiga iyo wanaaga ay isku hayaan labada lamaane, waxaana soo ifbaxaya udgoonka iyo quruxda ay leedahay nolosha lamaanaha ah.
Gacan furnaan:gabadhu marka ay ninkeeda isku halaynayso waxyaalaha ugu horeeya ee ay fiirinayso waa sida wanaagsan ee uu u hurayo waxyaalaha keenaya in gurigu uu u ekaado mid laga fekerayo iyo mid loo quuurayo waxyaalaha dhisaya bilicdiisa iyo degenaantiisa.
Maamulid:maamulida murugada, dhibaatooyinka, iyo ismaandhaafku waa xirfad looga baahanyahay qof walba oo doonaya inuu farxada gurigiisu noqoto mid dhamaystiran.
Kalsooni:kalsooni daradu waa cuqdad ka dhalata kas ama kama ha u dhacdee waxyaalo uu qofku ka dareemo lamaanihiisa si farxadu u labajibaarmato qofwalba waxaa laga doonaya inuu ka shaqeeyo siduu u dhisi lahaa kalsooni adag oo aan suurto galineyn in labo lamaane isqabtaan. soo jiidasho:nooca soo jiidasho ee raali galisa mid walba oo lamanaha ka mid ahi waa inuu muujiyo rabitaan, qanacsanaan iyo aaminaad dheeri ah iskuna dayaa qofwalba oo ka mid ah inuu kankale usoo jiito sidii magandkii oo kale.
Faraxsanaan:farxada oo ah waxa aan u doonayno inay lamaanuhu helaan ayaa saamayn weyn ku leh sida loo dhiso farxad, mida aan ka hadlayona waa in qofwalbaa gaarkiisa u muujiyaa waji furnaan, ilkacadayn iyo xiiso.
Tobonkaas qodon ayaan oran karnaa waa tobonka qodob ee ugu muhiimsan kuwaas oo saamayn weyn ku leh sida ay u noolaanayaan labada lamaane ha ahaadaan kuwo isku cusub ama kuwo mudo soo wada joogay.
Sida Ugu Fudud Ee Loo Qanciyo Lamaantaada Adigoon Daal Dareemin
Dumar Hadii sidaan loogu Raaxeeyo kacsi ayeey lasoo shiiraan Daawo muuqaal hadii aad Qaan gaar tahay